Qatar oo war kasoo saartay dagaalka Gaza iyo dadkii ugu badnaa oo maanta dhintay - Wardeeq 24 TV Qatar oo war kasoo saartay dagaalka Gaza iyo dadkii ugu badnaa oo maanta dhintay Wardeeq 24 TV
Home Warar-ka Qatar oo war kasoo saartay dagaalka Gaza iyo dadkii ugu badnaa oo...
Qatar oo war kasoo saartay dagaalka Gaza iyo dadkii ugu badnaa oo maanta dhintay
TOPSHOT - A ball of fire erupts from the Jala Tower as it is destroyed in an Israeli airstrike in Gaza City, controlled by the Palestinian Hamas movement, on May 15, 2021. - Israeli air strikes pounded the Gaza Strip, killing 10 members of an extended family and demolishing a key media building, while Palestinian militants launched rockets in return amid violence in the West Bank. Israel's air force targeted the 13-floor Jala Tower housing Qatar-based Al-Jazeera television and the Associated Press news agency. (Photo by Mahmud Hams / AFP)
Waxaa weli socda duqeymaha ay Israel ka wado dhulka Gaza, kuwaasi oo ay uga jawaabeyso sida ay sheegtay gantaalaha looga soo ridayo Gaza, waxaana uu dagaalka galay maalintii toddobaad oo xiriir ah.
Ra’iisal wasaaraha Israel, Benjamin Netanyahu ayaa wacad ku maray inay sii wadayaan duqeymaha, waxaana saaka duqeymaha ay diyaaradaha Israel subaxnimadii saaka ka fuliyeen Gaza ay ku dileen ugu yaraan 3 qof.
Duqeymaha Israel ayaa sidoo kale sababay dhimashada 10 qof oo hal qoys ah, kuwaasi oo ku sugnaa xera qaxooti oo ku taalla Gaza, waxaana qoyskaas dhan ka bad-baaday wiil yar oo magaciisa lagu sheegay Cumar Al-Haadi oo shan bilood jir ah.
Cumar Al-Haadi oo dhaawac uu soo gaaray, ayaa duqeymaha Israel ku waayey Hooyadii, afar walaalihii ah, habaryartii iyo afar ay ilmo adeer yihiin, sida laga soo warinayo dagaalka ka socda Gaza.
Dagaalyahanada Falastiin ayaa 278 gantaal oo ay kasoo gameen Gaza waxay ku dhaceen magaalooyinka Koonfurta Israel ku yaala ee Ashdod, Beersheba iyo Sderot, sida uu sheegay Millateriga Yahuuda.
Gantaalladaasi intooda badan uu ka hortagay habka difaaca gantaallada ee Israel.
Gantaal ku dhacay waddada Ramat Gan oo ku xaafad xaafad ka mid ah Tel-Aviv, waxaa ku dhintay hal nin, xilli uu firirka gantaalka gurigiisa ugu tagay, sidoo kale waxa uu millateriga yuhuuda sheegay in 7 qof oo kale ay kaga dhinteen gantaalahaas, ayada oo la rumeysan yahay inay Yahuudda qarsanayaan jabkooda.
Khasaraha ugu dambeeyey ayaa tirada guud ee shacabka ay Yahuudda xasuuqeen ka dhigeysa 148 qof oo ay ku jiraan ugu yaraan 41 caruur ah. Waxaa sidoo kale ku dhaawacmay in ka badan 580 qof.
Dhinaca kale, dowladda Qatar ayaa si kulul uga hadashay dagaalka Gaza, ayada oo fartay in si deg-deg ah loo soo gaba-gabeeyo arxan-darrada Israel iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah shacabka Gaza.
Wasiirka Arrimaha Dibedda Qatar oo shalay la kulmay madaxda siyaasadda ee Xamas, ayaa waxa uu ku baaqay in Israel ay joojiso duqeymaha ay ka waddo Gaza, sida ay sheegtay warbaahinta dowladda Qatar.
“Bulshada caalamka waa inay deg-deg ugu dhaqaaqda in lasoo geba-gebeeyo arxan-darrada Israel iyo weerarada joogtada ah ee ka dhanka ah shacabka Gaza iyo masjidka Al-Aqsa ee Qudus,” ayuu Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ku yiri bayaan uu soo saaray oo ay baahisay wakaaladda wararka rasmiga ah ee QNA.
Waxa uu sidoo kale u xaqiijiyey hoggaamiyaha Xamas Ismail Haniyeh taagerada Qatar ee “walaalaheeda Falastiin”.
Kulankooda ayaa yimid ayada oo Israel ay maalmo duqeymo ka waddo magaalada Gaza oo ay ku xoogan yihiin Xamas, ayaga oo ka jawaabaya gantaallo ay kooxdan ku weerareyso Israel.
Dowladda Qatar ayaa taageerta kooxda Xamas ayada oo gar-gaar iyo deymo malaayiin dollar ah siisa, sidoo kalena mararka qaar dhex-dhexaadisa ayaga iyo Israel
Previous articleCiidamada DF oo soo qabtay ninkii dilay Sahra Muxumed
Next articleWararkii ugu dambeeyey ee shirka DF iyo dowlad goboleedyada iyo xubno soo gaaray Muqdisho